I-Acyclovir vs Valacyclovir: Umahluko ophambili kunye nokufana - Iziyobisi Vs. Umhlobo | Eyenkanga 2021
Inkampani, Ukuphuma Impilo Imidlalo Ukuzonwabisa Imfundo Yezempilo, Iindaba Ulwazi Lweziyobisi Iziyobisi Vs. Umhlobo Iindaba, Impilo Impilo-Ntle Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba Uluntu, Inkampani Imfundo Yezempilo Inkampani, Imfundo Yezempilo Izilwanyana Zasekhaya Imfundo Yezempilo, Impilo
Eyona >> Iziyobisi Vs. Umhlobo >> I-Acyclovir vs Valacyclovir: Umahluko ophambili kunye nokufana
I-Acyclovir vs Valacyclovir: Umahluko ophambili kunye nokufana
I-Acyclovir kunye neValacyclovir ngamachiza afanayo asetyenziselwa ukunyanga usulelo lwe-herpes. Ziyafana kangangokuba i-valacyclovir ithathwa njengesiyobisi se-acyclovir. Ngamanye amagama, i-valacyclovir iguqulelwa kwi-acyclovir emzimbeni.
Omabini la mayeza ahlelwe kudidi lweziyobisi ekuthiwa zii-antivirals. Basebenza ngokuthintela intsholongwane ekuphindaphindeni. Nangona i-acyclovir kunye ne-valacyclovir zifana neziyobisi, kukho umahluko omncinci phakathi kwezi zimbini.
I-Acyclovir ligama elenziwe lafana nele generic okanye leekhemikhali likaSitavig kunye neZovirax. Isebenza njenge-purine analogue ukuvimba umsebenzi ukusuka kwintsholongwane ye-herpes simplex (HSV-1 kunye ne-HSV-2) kunye ne-varicella-zoster virus. Ngokukodwa, i-acyclovir isetyenziselwa ukunyanga ii-herpes zangasese, usulelo lwe-shingles, irhashalala (varicella), kunye nosulelo lwe-herpes njengezilonda ezibandayo.
I-Acyclovir iyafumaneka njengeyeza eliqhelekileyo. Inokulawulwa njenge-200 mg capsule yomlomo, i-200 mg / 5 ml yokumiswa ngomlomo, kunye ne-5% yamafutha asezantsi.
I-Acyclovir iqhele ukuthathwa njenge-400 mg okanye i-800 mg ye-tablet yomlomo ukuya kumaxesha ama-5 ngosuku kuxhomekeke kusulelo.
Ngaba ufuna elona xabiso libalaseleyo kwiAcyclovir?
Bhalisela iAcyclovir izaziso zexabiso kwaye ufumane ukuba amaxabiso atshintsha nini!
IValacyclovir yaziwa ngegama layo, Valtrex. Iqhubekeka ngokukhawuleza kwaye iguqulwe ibe yi-acyclovir, icandelo layo elisebenzayo. I-Valacyclovir i-FDA yamkelwe ukunyanga ii-herpes zangasese, izilonda ezibandayo (i-herpes labialis) kunye ne-herpes zoster. Inokunyanga nezilonda ezibandayo kunye nenkuku kwizigulana ezincinci.
I-Valacyclovir ibonelelwa njenge-500 mg okanye i-1 gm ithebhulethi yomlomo. Ngokungafaniyo ne-acyclovir, i-valacyclovir inokuthathwa kube kanye okanye kabini yonke imihla. Umthamo ocetyiswayo we-herpes zoster unokufikelela kumaxesha ama-3 yonke imihla. Ukuhamba rhoqo kweedosi kunokukhethwa kwezinye izigulana.
Fumana ikhadi lesaphulelo somntu ongatshatanga
I-Acyclovir vs iValacyclovir ecaleni ngothelekiso olusecaleni
I-Acyclovir kunye ne-valacyclovir zifana neziyobisi ezifanayo. Ngelixa bobabini bonyanga usulelo olufanayo, banomahluko okhoyo kwindlela ezenziwa ngayo. Lo mahluko unokufumaneka apha ngezantsi.
I-Herpes labialis (izilonda ezibandayo)
I-Herpes zoster (iingqungquthela)
Ngaba ikhona igeneric?
I-Acyclovir ligama eliqhelekileyo
I-Valacyclovir ligama eliqhelekileyo
Ngaba ihlawulwa yi-inshurensi?
Iyahluka ngokomboneleli wakho
Ixabiso leMali eliPhakathi
42 (iipilisi ezingama-60)
522 (iipilisi ezingama-21)
Ixabiso lesaphulelo esisodwa
Akukho nxibelwano lubalulekileyo eklinikhi
Ngaba ndingasebenzisa ngelixa ndicwangcisa ukukhulelwa, ukukhulelwa, okanye ukuncancisa?
I-Acyclovir ikudidi lokukhulelwa B. Akukho zifundo zinikezelweyo zokuvavanya i-acyclovir kwabasetyhini abakhulelweyo. Qhagamshelana nogqirha malunga namanyathelo oza kuwathatha ukuba ucwangcisa ukukhulelwa okanye ukuncancisa.
IValacyclovir ikudidi lokukhulelwa B. Akukho zifundo zinikezelweyo zokuvavanya i-valacyclovir kwabasetyhini abakhulelweyo. Qhagamshelana nogqirha malunga namanyathelo oza kuwathatha ukuba ucwangcisa ukukhulelwa okanye ukuncancisa.
ZIQHELEKILEYO: Yintoni iAcyclovir? | Yintoni iValacyclovir?
I-Acyclovir kunye ne-valacyclovir ngamachiza afanayo aphatha iintsholongwane ze-herpes simplex. Omabini la machiza anyanga i-HSV-1, HSV-2, kunye neherpes zoster virus. Ngelixa ziyafana, zinomahluko othile ekuqulunqweni nasekukhupheni.
I-Acyclovir ingadinga ukuthathwa ukuya kuthi ga kumaxesha ama-5 yonke imihla kuxhomekeke kusulelo olonyango. Le frequency kwi-dosing inokuqinisekisa ukuba kufuneka iipilisi ezili-10 ukuba kuthathwe iipilisi zamandla asezantsi. I-Valacyclovir, kwelinye icala, inokuthathwa ukuya kuthi ga kuma-2 okanye ama-3 amaxesha yonke imihla.
Ngaphandle kokungafani kwabo kwidosi, i-acyclovir kunye ne-valacyclovir zinomahluko omncinci ekusebenzeni. Omabini la machiza kufuneka asetyenziswe ngononophelo kwizigulana esele zikhulile kunye nezo zinokukhubazeka kwezintso. Oku kungenxa yokonyuka komngcipheko weziphumo ezibi kwaba bantu.
Zombini i-acyclovir kunye ne-valacyclovir kufuneka zisetyenziswe kuphela ngommiselo kunye nesikhokelo esivela kugqirha. Ulwazi oluchazwe apha lwenzelwe ukubonelela ngothelekiso lwemfundo. I-Acyclovir okanye i-valacyclovir inokucetyiswa ngokusekwe kwezinye izinto ezinokungadweliswa apha.
Ezona zi-5 ziPhezulu zeDumbbells eziLungelelanisiweyo
I-Estriol vs. estradiol: Umahluko, ukufana, kwaye kukuphi okungcono kuwe
Kwenzeka ntoni xa usitya iivithamini gummies ezininzi
kukhuselekile ukuthatha i-zoloft ngelixa ukhulelwe
aphume epokothweni ngokuchasene ne-inshurensi yezempilo
Ungathatha i-meloxicam kunye ne-ibuprofen kunye?
ndingayithatha ntoni ikhawuntari yesicefecefe
z pack vs amoxicillin yosulelo lwesono